ကျပ်သိန်း ၁၅ဝ ပေးရုံဖြင့် သော့အပ်မည့် တိုက်ခန်းများပါဝင်သော အိမ်ခြံမြေ အရောင်းပြပွဲ ပြုလု - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ မတ်၃ဝ- ကျပ်သိန်း ၁၅ဝ ပေးရုံဖြင့် သော့အပ်မည့် တိုက်ခန်း များပါဝင်သော အိမ်ခြံမြေအရောင်းပြပွဲကို မတ် ၃ဝ မှ ၃၁ ရက်အထိ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာ့မြို့ပြနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း(MDA)၏ အိမ်ခြံမြေအရောင်းပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းပေါ် ရှိ Lotte Hotel ၌ကျင်းပလျက်ရှိပြီး ကျပ်သိန်း ၁၅ဝ ပေးရုံဖြင့် သော့ အပ်မည့် တိုက်ခန်းများမှာ စမ်းချောင်းလမ်းမပေါ်ရှိ Sanchaung Garden Residence တွင် ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အတိုးနှုန်း ၁၁ ရာခိုင် နှုန်းအထိ သက်သာနိုင်မည့် KBZ အိမ်ရာချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ခွင့်၊ သီးသီးသန့်သန့် နေလိုသူတွေအတွက် Parami Valley အိမ်ရာ စသည်တို့ပါဝင်သည်။
”လက်ရှိအချိန်ဟာ ကွန်ဒိုမီနီယံဥပဒေ အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့အ တွက်ကြောင့် အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းဟာလည်း တည်ငြိမ်နေတဲ့ အနေအထား ရောက်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်ပဲ ဝယ်ဝယ်၊ နေ ထိုင်ဖို့အတွက်ပဲ ဝယ်ဝယ်၊ လက်ရှိအချိန်ကတော့ အိမ်ဝယ်ယူသင့်တဲ့အ ချိန်ကောင်းတစ်ခု အနေအထားဖြစ်တယ်”ဟု MDA အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ရဲဝင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၃ဝရက်က ပြောသည်။
အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲတွင် ကနဦးပေးချေငွေကို စိတ်ကြိုက်ညှိနှိုင်းခွင့်၊ ဝယ်ယူသူ စိတ်တိုင်းကျ ညှိနှိုင်းနိုင်သည့် Home Loan Flexible Payment Schedule အတိုးနှုန်း ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာနိုင်မည့် KBZ အိမ်ရာချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ခွင့်အပြင် အိမ်ရာအထူးဈေးနှုန်း အစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
”ဒီပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဝယ်ယူသူအနေနဲ့ KBZ အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ Developer အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အခန်းကို ကနဦးပေးသွင်း ငွေစိတ်ကြိုက် ညှိနှိုင်းနိုင်သလို၊ လစဉ်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမယ့် ငွေကိုလည်း မိမိရဲ့ လိုအပ်ချက်အတိုင်း ညှိနှိုင်းပေး သွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်”ဟု ShweProperty.com တည်ထောင်သူ ဦးကောင်း သူဝင်းက ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် လုံခြုံရေးအကာအကွယ်များပေးရန် တရု?
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား ပန်းမန် ပြပွဲနှင့် ပြိုင်ပွဲ ငါးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပမ??
အိုင်အက်စ်များအား ဆီးရီးယားတပ်များက အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ကာ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများကို ကယ်ဆယ?
တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်၏ အဝန်းအဝိုင်း နယ်နိမိတ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ခြံစည်းရိုးဖြစ?
ပြင်ဦးလွင်တွင် ခွင့်မပြု ဓာတုဆိုးဆေး ပါဝင်သော ထိုင်းနိုင်ငံမှ ချယ်ရီသီးဘူးများ သိမ်းဆည်း
မန္တလေးမြို့တွင် ပိုလန်နိုင်ငံ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်များဖြင့် သဘာဝဘေး အချိန်မီတုံ့ပြန်နိုင်??